Faa'iidooyinka miisaska marmar
3D Dhagax-gidaar & Farshaxan Xardhan
Marmarka Biyaha-jet Inlay
Qalabka Marmarka-Jadwalka & Farshaxanka
Safka & Boosta
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa doorta inay isticmaalaan miisaska marmar sababa la xiriira muuqaalkiisa quruxda badan iyo astaamo badan oo aad u fiican.
Marka ugu horeysa, adkaanta sare Ma fududa in wax laga beddelo. Marble dabiici ah waa inuu dhaafo sannado badan si uu si dabiici ah u sameysto Sidaa darteed dabiici ahaan waa isku mid qaabdhismeedkiisa. Isugeynta balaadhinta toosan ayaa aad u yar, ku dhowaad ma leh walaac gudaha ah. Markaa ad-adaygeedu aad buu u sarreeyaa, marka la adeegsanayo geedi socodku isma beddeli doono.
Marka labaad, adkaysi u leh daxalka iyo aashitada. Marmarka dabiiciga ah qaab dhismeedka ururkiisu waa xitaa, sidaa darteed ma fududa in lagu dhibaateeyo nabaad-guurka dareeraha asiidhka salka ku haya.Marka isticmaalku sidoo kale uusan u baahnayn inuu ku tiirsanaado baaritaanka si loo wanaajiyo galmada siman, kor u qaad si fudud oo sahlan.
Saddexaad, iska caabbinta dharka sare iyo caabbinta heerkulka sare. Sababtoo ah adkaanta maaddada marmarka ayaa ka saraysa, adkeysiguna aad ayuu u wanaagsan yahay, sidaa darteed iska caabbinta xidhantu sidoo kale way ka xoog badan tahay. Intaas oo keliya maahan, iska caabbinta heerkulka sare sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Ma noqon doonto isbeddelo heer-kul ah iyo isbeddello. Heerkulka qolka ayaa ku ilaalin kara astaamaha jir ahaaneed ee aasaasiga ah.Sidaa darteed adeegga noloshu wuu dheer yahay.
Tan afraad, guryaha jireed oo deggan. Qaab dhismeedka marmar dabiiciga waa mid taxaddar leh oo xitaa. Xitaa haddii ay tahay saameyn dibadeed, ma burrineyso, saxnaanta dusha sare saameyn kuma yeelan doonto Sababtoo ah maaddadu muuqaal ahaan way deggan tahay, waxay dammaanad ka qaadi kartaa wax isbeddel ah ka dib isticmaalka muddada-dheer iyo anti-miridhku, antimagnetic, ningax.
Shanaad, magnetis la'aan. Maaddada marmaca dabiiciga ah iyadoon loo eegin inta ay le'eg tahay isticmaalka ka dib uma muuqan doonto magnetized, waxay u dhaqaaqi kartaa si habsami leh.
Faa'iidooyinkaas awgood, miisaska marmarka waxaa loo adeegsadaa si aad iyo aad u ballaaran, naqshadduna sidoo kale waa mid aad u kala duwan. Marka lagu daro miisaska marmarka fudud, waxaa sidoo kale lagu dari karaa qalab kale, shil ka dhaca bilicsanaanta gaarka ah.
Waqtiga boostada: Dec-15-2020
Qolka 1103, Dhismaha B, Hengyuan Elite Mansion 1985, Mupu Road 101, Degmada Huli, Xiamen, Shiinaha
dheeraad ah ..